5 “O ɔbabea a atamfo atow ahyɛ no so, twitwa wo ho akam,+ efisɛ wɔatwa yɛn ho ahyia.+ Na wɔde abaa bɛhwe Israel temmufo asom.+ 2 “Na wo, Betlehem Efrata,+ wo a wusua koraa sɛ wɔbɛkan wo afra Yuda mpempem mu,+ wo mu+ na mɛma obi afi abɛyɛ Israel sodifo.+ Ɔno na n’ase fi tete a enni ano.+ 3 “Enti obeyi wɔn ama+ kosi sɛ nea awo aka no no bɛwo.+ Na ne nuanom a aka bɛsan abɛka Israelfo ho. 4 “Na ɔbɛsɔre agyina de Yehowa ahoɔden+ ne Yehowa, ne Nyankopɔn din kɛse no ayɛn wɔn.+ Wɔbɛtena hɔ dwoodwoo,+ na ne kɛseyɛ bedu asase ano.+ 5 Oyi bɛyɛ asomdwoe.+ Na sɛ Asiria ba yɛn asase so betiatia yɛn aban mu a,+ yɛbɛma nguanhwɛfo baason, adesamma mu abirɛmpɔn baawɔtwe, ne no adi asi. 6 Na wɔde nkrante bɛyɛn Asiria asase+ ne Nimrod asase+ wɔ n’apon ano. Na sɛ Asiria ba yɛn asase so na ne nan tia yɛn hye so a, obegye yɛn afi ne nsam.+ 7 “Na Yakob nkaefo+ no bɛyɛ aman bebree mu sɛ obosu a efi Yehowa nkyɛn,+ te sɛ osu a ɛpete gu nhabamma so+ a ɛmfa n’ani nto onipa so na ɛntwɛn ɔdesani.+ 8 Na aman bebree behu Yakob nkaefo sɛ gyata wɔ kwae mu mmoa mu, te sɛ gyatanini wɔ nguankuw mu. Ɔno na ɔba a, otiatia wɔn so tetew wɔn mu+ a ogyefo biara nni hɔ. 9 Wobɛma wo nsa so wɔ w’atamfo so,+ na wɔn a wokyi wo nyinaa ase bɛhyew.”+ 10 Yehowa aka sɛ, “Saa da no, mekunkum w’apɔnkɔ asɛe wo nteaseɛnam.+ 11 Mɛsɛe w’asase so nkurow na madwiriw w’abannennen nyinaa agu.+ 12 Metu asumansɛm afi wo nsam na nkonyaayifo biara rentena wo nkyɛn bio.+ 13 Mɛsɛe w’ahoni ne w’abosom adum nyinaa, na worenkotow wo nsa ano adwuma bio.+ 14 Metutu w’abosonnua agu+ na masɛe wo nkurow. 15 Na mede anibere ne abufuhyew bɛtwe aman a wɔanyɛ osetie no aso.”+